avo lumen IP65 rehetra in iray masoaryro LED eny an-dalana fahazavana mpamatsy ary mpanamboatra - Shina orinasa - Langxu Lighting.
Home > Products > Solar Street Light > Solar LED Street Light > avo lumen IP65 rehetra in iray masoandro LED eny an-dalana fahazavana
avo lumen IP65 rehetra in iray masoandro LED eny an-dalana fahazavana
The avo lumen IP65 smd 20w 30w 40w rehetra in iray masoandro LED eny an-dalana fahazavana nanao ny aluminium rehetraoy amin'ny ultra-avo mafana conductivity, antoka ny haingana indrindra hafanana niteraka ny ny LED fahazavana loharano; High-fampdiaehoana masontsivana: izany mandany nafarana avo-efficiency Chip patanty fonosana, izay dia 60% Bebe kokoa angovo mahomby noho ny nentim-paharazana eny an-dalana jiro.
˜ Made vita amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny fitrandrahana hazavana avo lenta.
˜˜ Ny famolavolana hazavana voaaro: ny fitovian'ny làlan'ny arabe dia mihoatra ny 0.7, ny hazavana dia fanamiana ary tsy misy ny fizotry ny toerana.
˜ Fahasalamana ara-tontolo iainana: Ny LED dia tsy misy rakitra, tsy misy UV, tsy misy taratra, ary mety tsara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'ny mason'ny olombelona;
Hot Tags: avo lumen IP65 rehetra in iray masoandro LED eny an-dalana mazava, Shina, Manufacturers, mpamatsy, Factory, Wholesale, Buy, namboarina, ao amin'ny staoky, Cheap, Pricelist, teny nindramina, Style
avo lumen masoandro LED eny an-dalana fahazavana20w 30w 40w rehetra in iray masoandro LED eny an-dalana fahazavanaIP65 smd masoandro LED eny an-dalana fahazavanarehetra in iray masoandro LED eny an-dalana fahazavana